ပြန်လာရင်ကြိုမှာလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပြန်လာရင်ကြိုမှာလား
Posted by သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) on Sep 15, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary |9comments
မရောက်တာလည်းကြာပြီဖြစ်သလို ကျွန်တော်လည်း လှည့်လာဖို့ရွာကလေးကို အချိန်မပေးနိုင်နေဘူး။ ကျွန်တော်က ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင် ရွာကနေမြို့တက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူ။ မြို့ပြမှာ ကိုယ့်ဘ၀ကိုကိုယ်ရပ်တည်နိုင်အောင်လုပ်နေရင်း တစ်ခါတစ်ခါ ရွာကလေးကို မေ့နေသလိုဖြစ်နေခဲ့တာကြာပြီ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာရွာကိုအလည်ပြန်ချင်စိတ်တွေက တဖွားဖွား။ ဒါပေမယ့်လည်းပေါ့ ကိုယ်ရွာကိုပြန်တဲ့အချိန်ဟာ ခဏလေးတော့ ဘယ်ဖြစ်စေချင်မလဲလေ။ ရွာထဲက ကျွန်တော့်ကိုမမြင်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော် ပေါက်ဖော်တွေကိုလည်း တရင်းတနှီးပျော်ဟယ်နောက်ဟယ်လုပ်ချင်သေးတယ်။ ပြီးတော့ ရွာရဲ့ သာရေး၊ နာရေး ဘာညာသာရကာ နေကြာကွာစေ့တွေအကြောင်းလည်း သေသေချာချာနားထောင်ချင်သေးတာလေ။ မှတ်မှတ်ရရ ရွာကနေ ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့မိတာ ဇန်န၀ါရီလ ကျွန်တော့်မေမေ ကားအက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းပဲ။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်ရှိရာ မန်းလေးဆေးရုံးကြီးကို အပြေးလာတဲ့ ကိုပေါက်(မန္တလေး)၊ ဦးမာဃ နဲ့ ဗုံဗုံတို့ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်တာပဲ။
တစ်မြို့တစ်ရွာမှာ ရွာသူထဲက ကိုယ့်ကိုလာကြည့်တဲ့ အဆွေတော်တွေကို ဘယ်လိုကျေးဇူးတင်မိမှန်းမသိဘူး။ နောက်တော့ ရွှေတိုက်စိုး လည်းလာတယ်၊ စွယ်တော်ရွက်ဆိုရင် ဖုန်းလည်းဆက်လာတယ်၊ ပြီးတော့ သခင်မိုဘိုင်းဆိုရင် မြ၀တီကနေ တကူးတကဖုန်းဆက်မေးကြတယ်။ အဲဒီတုန်းကကျေးဇူးတင်လိုက်တာလေ။ စိတ်ထဲဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူး။ ကိုပေါက်နဲ့အတူ ကိုရွှေတိုက်စိုးလာတွေ့တုန်းကဆိုရင် ဆေးဝါးကုသဖို့ဆိုပြီး ရွာသူရွာသားတွေစုပြီးပေးလိုက်တဲ့ စာအိတ်ကလေးကိုတောင် ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ရပါသေးတယ်။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော် အလုပ်တစ်ဖက် မေမေ့ကျန်းမာရေးတစ်ဖက်နဲ့ ဗျာများနေရတာနဲ့ပဲ ရွာကိုပြန်မလာဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတော့ အမှတ်ထင်ထင်ရှိဆဲပဲဗျ။
ပြောရရင် ဂေဇက်မှာ ကျွန်တော်သွေးခဲ့တဲ့ ကလောင်က ခုတော့လည်း စာမျက်နှာတွေထက်မှာ နေရာလေးတစ်ခုတော့အရာထင်စပြုလာပြီလေ။
စတဲ့ စာမူတွေဆိုရင် ခုဆို ဖော်ပြခံသွားရပါပြီ။ ဘာပဲပြောပြော ဂေဇက်မှာတင်ပြခွင့်ရခဲ့တဲ့ အနုပညာလေးတွေ အရာထင်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတွေတင်မိရပါတယ်။
ဒီနေ အလင်းဆက်က ကျွန်တော့်စာတွေကို ဆာလို့ပြန်ဖတ်နေရတယ်လို့ဆိုလာတော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးကြီးဗျ။ ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ အဲလိုဆိုရင် အရင်တုန်းကလိုပဲ သော်ဇင်(လွိုင်ကော်)ဆိုတာကို ကြိုဆိုပေးကြပါဦး။
ရွှေ ရဲ့ ရေးဖော်ရေးဘက်တစ်ဦးအနေနဲ့ ရော..
ဟောဒီရွာထဲ… ကျွန်တော် ၀င်လာဖြစ်ဖို့ … အကြောင်း.ဖန်ပေးခဲ့သူအနေနဲ့ရော…
ကိုသော်ဇင် ရဲ့ .. ရသ ..မြောက်တဲ့စာပေလက်ရာတွေကို နှစ်သက်တဲ့ …
ကိုသော်ဇင့်ကို.. ကြိုဆိုနေမှာပါ ။
ကိုသော်ဇင်.. ဒီရွာထဲ.. မအားလပ်လို့ .. မရောက်တာ ကြာတဲ့အခါ….
ကျွန်တော်…. ဆာ လာတဲ့ ..စာပေလက်ရာတွေ ထဲ..မှာ.
ဒါကြောင့်… ဒီနေ့ နေ့လည်က….
ကိုသော်ဇင့် စာလေးတွေ.. ပြန်ရှာဖတ်လိုက်သေးတယ် ။
ဖတ်ခဲ့ပြီးသားတွေရော.. ပြန်ဖတ်ချင်လာလို့ …ပါ ။
အားတဲ့ အခါတိုင်း… ရွာထဲ ကို… လမ်းလျှောက်ထွက်ပါဦးကိုသော်ဇင်ရေ….
ရွာထိပ်မှာ ပန်းစည်းကြီးနဲ့ လာကြိုဦးမှာ…
ရွာသားတစ်ယောက်အောင်မြင်နေတော့..ပရိသတ်အနေနဲ့ .ဂုဏ်ယူရပါတယ်ခင်ဗျာ .